8 Siyaabood oo Looga Hortago Wahsiga |
Dhammaanteen waan wahsannaa mararka qaar, balse waxay dhib noqoneysaa haddii ay caado kuu noqoto inaad dib u dhigato howlaha kuu yaalla adiga oo og caqabadaha aad kala kulmi karto haddii aadan howlaha waqtigooda ku qaban. Wahsiga badan wuxuu xitaa u daran yahay caafimaadkaaga, isaga oo kuu sababaya walwal, kuguna dhiirrigelinaya inaadan jimicsi sameyn amaba aadan cunin cunto caafimaad leh amaba xitaa inaad ka daahdo ballanta dhaqtarka adiga oo xanuun dareemaya.
Ian Taylor, oo ah dhaqtar cilmu-nafsiga yaqaanna waxna ka barta Loughborough University, ayaa ogaaday in dadka ay aalaaba qiyaasaan in awooddooda ay ku tashan karaan. Taas beddelkeed waxaad isku daydaa inaad iska indhatirto dhanka xun ee howsha, u feker inay yihiin kuwo muhiim ah qeybna ka ah guushaada.
4. Yareey dadaalka aad gelineyso
Si fudud u bilow howsha. Ku lebiso dharkaaga orordka haddii aad dooneyso inaad subixii orod sameyso; amaba meel aad arki karto sii dhigo waxyaabaha aad dooneyso inaad ka shaqeyso, si markaad subixii soo kacdo ay u noqdaan waxa ugu horreeya ee aad aragto. Xusuusnow inaadan dheg u dhigin wax walboo ku carqaladeyn kara – kumbiyuutarkaaga demi, telefoonkaaga aamusii, iskana xir baraha bulshada.
Xitaa waxyaabo yaryar oo ay ka mid yihiin erayada aad adeegsato ayaa sameyn kara isbeddel. Sidaas daraaddeed, haku qeexin naftaada inay tahay qof mar walba ka qeyb qaata orordka, cuntadana koontaroola, balse ku qeex inay tahay “orordyahan” ama “qof cunto caafimaad leh cuna” waxaana laga yaabaa inaad mar walba joogteyso caadadaas. Ian Taylor ayaa sheegay in arrintaasi ay shaqeyneyso, sababtoo ah waxay xiriir ka dhex abuureysaa adiga iyo dabeecadda aad is tusisay.
Tags: 8 Siyaabood oo Looga Hortago Wahsiga
Next post Cashirada Tukaha Laga Barto ee Horumarka Lagu Gaaro
Previous post Diinta Hinduuga - Muxuu qofka Hinduuga Ah aminsanyahay?